Insipho Yezinhloso Eziningi
I-Hebei Baiyun Daily Chemical Co., LTD. wabamba iqhaza emsebenzini wezenhlalakahle wokutshalwa kwamahlathi entwasahlobo e-Hebei Foreign Studies University
Amakhemikhali ansuku zonke eBaiyun abambe iqhaza kwi-129th Canton Fair
Amakhemikhali ansuku zonke eBaiyun abambe iqhaza kwi-129th Canton Fair Kusukela ngo-Ephreli 15 kuya ku-24, i-129th China Import and Export Fair (“Canton Fair”) izobanjelwa online. Cishe ababonisi abangama-26000, imibukiso engaphezu kuka-2.7 wezigidi kanye nabathengi abavela emazwenikazi ama-5 bazobamba iqhaza kulo mbukiso. U-Hebei Baiyun Dail ...
Ingabe ukugeza kuyanyanyisa? Ungayihlanza kanjani ingcweti kubhavu
Ah, ukucabanga nje ngokucwila ebhavini elifudumele lamabhamuza kusikhulula. Ukukhanyisa amakhandlela, ukudlala umculo opholile, nokungena kubhavu webhamuza nencwadi noma ingilazi yewayini kuyimikhuba yabantu abazithandayo yokuzinakekela. Kodwa ingabe ukugeza kuyanyanyisa ngempela? Cabanga ngakho: ungene ku ...
Yimuphi omthanda kakhulu? Ukuwasha uketshezi noma impuphu yokuwasha?
Ukugeza uketshezi kungcono, amandla okuqeda ukungcola aqinile, abiza kakhulu. 1. Uketshezi lokuwasha luqukethe kakhulu i-non-ionic surfactant, enekhono eliqinile lokuqeda ukungcola, futhi ingangena ekujuleni kwengubo yezingubo ukuze ithole ukungcola okuphelele. I-washi ...
Umuthi wokugeza awaziwa, noma ngabe ugeza izitsha noma imifino nezithelo, okokuhlanza akubalulekile. Kepha futhi kunezinzuzo ezithile ezingalindelekile. 1, Kungasusa ngempumelelo inkungu engilazini nesibuko. Ngemuva kokugeza, inkungu esibukweni endlini yokugezela nenkungu yamanzi ku-wi ...
Ngabe insipho yokuhlanza ingane isengasetshenziswa ngemuva kokuphelelwa yisikhathi
Ngoba isikhumba sengane sibuthakathaka, kufanele unake izinto ezithinta isikhumba sengane, njengezimpahla. Ngakho-ke izingubo zengane zivame ukusebenzisa insipho yokuhlanza ingane ingcono, ngoba uma iqhathaniswa nensipho yokuwasha ejwayelekile, ukulimala kwengane kuzoba kuncane, ngakho-ke kukhulu kakhulu ...
Uyawazi umehluko phakathi kwensipho yokuwasha kanye nensipho ketshezi?
Ingxenye esebenzayo yokuwasha ilondolo ikakhulukazi ayi-ionic surfactant, futhi ukwakheka kwayo kufaka ukuphela okumanzi amanzi kanye nokuphela okumanzi uwoyela, lapho ukuphela okumanzi uwoyela kuhlangana khona nebala, bese kuhlukanisa ibala nendwangu ngokunyakaza ngokomzimba. isikhathi, ama-surfactants anciphisa ukungezwani kwamanzi, ngakho-ke ...
ibha yensipho emotweni yakho ingenza okuhle kakhulu
Insipho empilweni yethu yansuku zonke iyizidingo ezijwayelekile kakhulu zansuku zonke, ingathengwa kunoma yisiphi isitolo esikhulu, uma uyifaka emotweni, kunezinzuzo eziningi. Okokuqala, ngezinsuku zemvula, khipha insipho elungiselelwe ukuxazulula inkinga inkungu esibukweni sokubuka ngemuva, indlela eqondile ukusebenzisa insipho ku-rearv ...
Kungani ukugeza ngensipho namanzi kusivikela ekuthelelekeni i-COVID-19?
Ngokusho kwe-World Health Organisation (WHO) nezinye izinhlaka eziningi kanye nochwepheshe bezempilo, indlela engcono yokugwema i-COVID-19 ukumane nje kuqinisekiswe ukuwashwa kwezandla ngensipho nangamanzi ngaso sonke isikhathi. isebenza kaninginingi, isebenza kanjani ...
I-Hebei Baiyun Daily Chemical Co, Ltd. eyasungulwa ngonyaka we-1997, itholakala esifundazweni saseShijiazhuang-Hebei — umnotho omkhulu futhi onamandla kakhulu ..
IGengzhuang Village, Industrial Park, Shenze County, Shijiazhuang, Hebei
I-Hebei Baiyun Daily Chemical Co., LTD. futhi ...
I-Baiyun chemical nsuku zonke ibambe iqhaza kwi ...